I-2021 Isikhokelo esinegunya lokunyusa isini ngokunyanga ukungasebenzi kakuhle kwe-Erectile (ED) -CMOAPI
Ukuphuhliswa kwembali yokunyanga ukungasebenzi kakuhle kwe-Erectile (ED)
Uvavanyo lwesimo se-Erectile Dysfunction (ED)
Yintoni ukungasebenzi kakuhle kwe-Erectile (ED)?
Yintoni ebangela ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile (ED)?
Wazi njani ukuba uyanyamezela kwi-ED?
Ungayinyanga njani i-erectile dysfunction (ED)?
Iziyobisi eziphambili ze-4 ezisebenzayo zokunyanga ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile (ED) emhlabeni?
Sildenafil vs Tadalafil VS Vardenafil VS Avanafil Yeyiphi eyona ilungileyo?
Amava ekwabelwana ngawo kwiReddit
Amava ekwabelwana ngawo kwiSabelo
Ungazithenga njani iziyobisi ezithembisayo ezonyusa isondo kwi-Intanethi?
Ukuphuhliswa kwembali yokunyangaUkungasebenzi kakuhle kwe-Erectile (ED)
Ukungasebenzi kakuhle kwe-Erectile bekuyinkxalabo yamadoda ukusukela ekuqaleni kwembali ebhaliweyo. Unyango lwe-ED luqala kwangoko kwinkulungwane yesibhozo, xa amadoda aseRoma yakudala naseGrisi ayenxibe izithsaba zelungu lomqhagi kunye neebhokhwe. Yikholwe ukuba inokusebenza njenge-aphrodisiac kunye nokukhuthaza ukusebenza ngokwesondo. Ukuphela kwenkulungwane ye-18, i-testis yegusha ekhutshiweyo yatofwa njengomthombo we testosterone ukulungisa ukungabi namandla. Kwi-1970s, ukufakelwa kwepenile kuzenzele igama njengesisombululo sokungasebenzi kakuhle kwe-erectile. Kwangelo xesha, iimpompo zepenile vacuum zazifumana ukuthandwa kwaye i-Geddings Osbon's "isixhobo esilingana nolutsha" (okanye i-YED) yayivula indlela yezixhobo zokuphuma kwepenisi esiqhelene nazo unanamhla. I-1980s yabeka isiseko senguquko kwisini kunye nophando lukaGqirha Giles Brindley. UBrindley watofa i-vasodilator kwimithambo yakhe, eyabangela ukuphumla kwemisipha egudileyo kunye nokwenza ulwakhiwo. Ukufumanisa kwakhe kukhokelele kuphando kwi-vasodilators kunye neearhente zokuthintela i-alpha njengonyango lokungasebenzi kakuhle kwe-erectile. Uqhakamshelwano olukhulu lwenzekile kwii-1990s zakuqala, i-sildenafil yamkelwa njengeyeza lentliziyo, kwaye kwafunyaniswa ukuba amadoda athatha amayeza aba namava okuqina, nawokuhlala ixesha elide. Oku kukhokelele kuphando oluqhubekayo kwi-sildenafil njengechiza le-erectile, kunye ne-Pfizer ityhila iViagra kwi1998. USildenafil waba sisiyobisi sokuqala somlomo ukuvunywa ukunyanga i-ED. Unyango lokungasebenzi kakuhle kwe-erectile kwaguqulwa kwafunyanwa i-sildenafil okanye iViagra. Oku kwalandelwa kukusetyenziswa kwe tadalafil kunye ne-vardenafil njengeyeza elifanayo le-phosphodiesterase-5 inhibitor yomlomo kunyango lwe-ED kwi-2003. Kumadoda amaninzi, ubomi abuzange bube ngcono.
Ukungasebenzi kakuhle kwe-Erectile (ED) yimeko yonyango eqhelekileyo yamadoda, kuvavanyo olwenziweyo lubonisa ukuba i-ED iya isanda ngokuguga: malunga ne-40% yamadoda ayachaphazeleka eneminyaka eyi-40 kwaye phantse i-70% yamadoda ayachaphazeleka eneminyaka eyi-70. Ubukho be-ED epheleleyo inyukile ukusuka kwi-5% kubudala be-40 ukuya kwi-15% kubudala be-70.2 yobudala yayiyeyona nto yahlukileyo inxulumene kakhulu ne-ED. Ukwehla komnqweno wesini kunye nokukhula kweminyaka. Amadoda kwiqela elidala (i-50 ukuya kwi-59) ayengaphezulu kwamaxesha e-3 njengamava okufumana iingxaki zokwakha kunye nokuxela umnqweno ophantsi wesini xa kuthelekiswa namadoda 18 ukuya kwi-29. Amava okungasebenzi kakuhle ngokwesondo ayekhona kubantu ababesempilweni emzimbeni nasemphefumlweni.
Kule minyaka ingamashumi idlulileyo, kuye kwakho ukonyuka okubonakalayo ekuqondeni kwethu iindlela zomzimba ezinoxanduva lokungasebenzi kakuhle kwe-erectile (ED). Ukungasebenzi kakuhle kwe-Erectile (ED) kuye kwaba sisihloko semithombo yeendaba eqaphelekayo kunye nomdla ekuhlaleni nasekwamkelweni. Ukuthelekisa ukwanda kolwazi ibe kukuqhuma kukhetho lonyango.
Ukungasebenzi kakuhle kwe-Erectile okanye ukungahambelani (i-ED), ekwabizwa ngokuba kukungabinamandla, kukungakwazi ukukhula kunye nokugcina ulwakhiwo lokwabelana ngesondo okwanelisayo okanye isenzo. Rhoqo xa ukuhamba kwegazi kwilungu lobudoda kunqunyelwe okanye kwenzakele imithambo-luvo. Ihlala ibangelwa yingxaki yempilo, enje: uxinzelelo, ukudinwa, uxinzelelo njl.Ungazama ukusebenzisa iziyobisi, ukusombulula unobangela, ukutshintsha indlela ophila ngayo kunye nokusombulula iingxaki zengqondo kunyango.
Ukuba ujonga ukhetho lokunyanga i-ED yakho, eli nqaku libonelela ngolwazi oluncedo kubantu abahlangabezana nale ngxaki, okanye abo basondele kubo.
(1) Oomatshini bokungasebenzi kakuhle kwe-erectile (ED)
Oku kubangela ukuba ubudoda bakho bande kwaye buqine xa igazi ligcwalisa amagumbi amabini abizwa ngokuba yi-corpora cavernosa, kakhulu njengebhaluni njengoko izele ngamanzi. Iimpembelelo ezivela kwingqondo kunye neentsholongwane zangasese ziqala inkqubo. Nantoni na ethintela ezi ntshukumisa okanye ithintela ukuhamba kwegazi kwilungu lobudoda kunokubangela i-ED.
(2) Iimpawu / Iimpawu zokungasebenzi kakuhle kwe-erectile (ED)
Indoda ithathwa njenge-ED xa ezi mpawu zilandelayo zisenzeka rhoqo:
Ingxaki yokufumana ulwakhiwo
Ingxaki yokuba nolungiso
Ingxaki yokugcina ulwakhiwo ixesha elaneleyo
Ezinye iingxaki zesondo zinxulumene ne-ED kwaye zinokubangela iimpawu ezifanayo kwi-ED, ezinje:
Ukuphuma ngaphambi kwexesha (ukuphuma ngokukhawuleza)
Ukungakwazi ukuba ne-orgasm emva kovuselelo olwaneleyo
Ukulibazisa i-ejaculation (xa i-ejaculation ithatha ixesha elide kakhulu) ngqo phezulu
Amanqanaba asezantsi e-testosterone testosterone
Ukunciphisa i-libido okanye ukuqhuba ngesondo
Ukungasebenzi kakuhle kwimisipha yomgangatho we-pelvic
Umothuko kwi-pelvis, njengokuqhekeka kwe-pelvic
Olunye uphononongo lubonise ukuba amadoda ane-ED asemngciphekweni omkhulu wokuhlaselwa sisifo sentliziyo, ukubetha okanye iingxaki zokujikeleza emilenzeni. I-ED ikwabangela:
Ukubandezeleka kwendoda kunye neqabane layo
Thetha nogqirha wakho ukuba unayo nayiphi na le mpawu, ngakumbi ukuba zihlale iinyanga ezintathu okanye nangaphezulu. Banokukunceda ekuboneni ukuba iimpawu zakho zibangelwa yimeko engxamisekileyo efuna unyango. Ijonge ukulungisa okanye ukuphucula ukusebenza kwe-erectile, ukunceda impilo ejikelezayo kunye nokunceda umgangatho wobomi bendoda
(3) Umahluko phakathi kwe-ED kunye nokuqhuba kakubi ngokwesondo
Amadoda anokuba neentlobo ezininzi zemicimbi kubandakanya ukuqhuba kakubi ngokwesondo kunye neengxaki nge-ejaculation. Kodwa i-ED ibhekisa ngqo kwingxaki yokufumana okanye yokugcina ulwakhiwo. Unganakho ukuqhuba ngesondo okunempilo, kodwa umzimba ongazukuphendula. Uninzi lwexesha kukho imeko ebonakalayo yengxaki.
Amadoda ayabandakanyeka kwinkqubo yokwakhiwa kwengqondo, iihomoni, iimvakalelo, imithambo-luvo, izihlunu kunye nemithambo yegazi. Naziphi na kwezi ngxaki zinokubangela okanye zenze igalelo kwi-ED. Ngobudala, inani lamadoda aneempawu ezithile ze-ED liya kunyuka ngokunyuka kobomi, kodwa ukwaluphala akuyi kukhokelela kwi-ED. I-ED inokunyangwa nangaliphi na ubudala.
Indlela yokuphila yabangela i-ED
Indlela yokuphila ekhetha indlela yokuphila inokuba negalelo kwi-ED, ukutshaya, ukusela kakhulu, kunye nokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi kunokuphazamisa ukujikeleza kwegazi kwaye kukhokelele ekusebenzeni kwe-erectile. Ukutyeba kakhulu kunye nokufumana umthambo omncinci kakhulu kunegalelo kukungasebenzi kakuhle kwe-erectile. Amadoda enza umthambo rhoqo anomngcipheko ophantsi wokungasebenzi kakuhle kwe-erectile.
I-Psychological ibangele i-ED
Imood elungileyo inokukunceda ukuvusa ingqondo, ukuba uphantsi koxinzelelo, iimeko zempilo yengqondo ezinje ngoxinzelelo okanye uxinzelelo, ingqondo yakho inokuba nengxaki yokudala unxibelelwano lwe-nerve kunye nokukhulula iihormoni ezinoxanduva lokubangela ulwakhiwo. Imicimbi yengqondo inokuba negalelo elibalulekileyo kukungasebenzi kakuhle kwe-erectile.
Izifo ezingapheliyo zibangela i-ED
Ikhonkco phakathi kwesifo esinganyangekiyo kunye ne-ED lelona libalulekileyo iswekile. Amadoda anesifo seswekile aphindwe kabini ukuya kathathu kunokwenzeka ukuba abe nokungasebenzi kakuhle kwe-erectile. Nayiphi na imeko echaphazela indlela igazi elihamba ngayo emzimbeni wakho inokukhokelela kwi-ED. Oku kubandakanya Isifo senhliziyo, isifo sokuqina kwemithambo yegazi (ukuqina kwemithambo), isifo sezintso, kunye nokuqina kwemithambo.
Amayeza abangele i-ED
Amayeza amaninzi anokubangela okanye enze igalelo kukungasebenzi kakuhle kwe-erectile, kubandakanya uxinzelelo lwegazi iziyobisi, i-anti-depressants, i-antihistamines, amayeza e-acid reflux, amayeza eentlungu ze-opioid. kunye noxinzelelo. Thetha nogqirha wakho ukuba ucinga ukuba amayeza kagqirha okanye ekhawuntareni anokubangela iingxaki ze-erectile. Kodwa ungaze uyeke ukuthatha naliphi na iyeza ngaphambi kokuba uxoxe ngalo nogqirha wakho.
Ugqirha lubangele i-ED
Unyango okanye utyando kunyango lomhlaza webele, umhlaza wesinyi, okanye ukwandiswa kweprotrate (BPH) ngamanye amaxesha kungonakalisa imithambo yegazi kunye nemithambo yegazi kufutshane nepipi. Ukuba umonakalo wemithambo isisigxina, uyakufuna unyango ukuze ufumane ulwakhiwo. Kodwa ngamanye amaxesha utyando lubangela i-ED yethutyana ebangcono ngokwayo emva kweenyanga ezi-6 ukuya kwezi-18.
Kwiimeko ezininzi, ukuba ubonakala unomdla okanye umnqweno wesini, ukungakwazi ukuvuswa, ukulala kabuhlungu, unokujongana nokungasebenzi kakuhle kwe-erectile. Ngamaxesha athile, okanye okwexeshana, iingxaki zesini azibonisi ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile.
Ukungasebenzi kakuhle kwe-Erectile (ED) kunokuchaphazela amadoda akwiminyaka eyahlukeneyo, kodwa ayizukuchaphazela umgangatho wobomi. Eli nqaku linokukunceda ufumane unyango olufanelekileyo kwaye uncede ukuxhasa ubomi obufezekileyo besini kunye nokuphucula ukusebenza kwe-erectile, kukwenze uzive ubuyile kumntu wakho wakudala kwakhona.
Uninzi lwamadoda, zihlala zijonga ukuthatha amayeza ngomlomo kunyango lwe-erectile dysfunction (ED) okokuqala, ukunceda ukufumana kunye nokugcina ulwakhiwo. La madoda enza iziyobisi zomlomo ezonyusa isondo (PDE5 inhibitors) zibandakanya i-tadalafil (i-Cialis), i-sildenafil (i-Viagra), i-vardenafil (i-Levitra, i-Staxyn) kunye ne-avanafil (i-Stendra), ngokuphucula ukusebenza ngokwesondo ngokuphumla kwezihlunu ezigudileyo kunye nokunyusa ukuhamba kwegazi ukuya kwilungu lobudoda. Akufanele uthathe naliphi na kula machiza ukunyanga ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile (ED) ukuba uthatha iitrate zesifo sentliziyo. Unyango lweTesttosterone (TRT) lunokucetyiswa ukuba unamanqanaba asezantsi e testosterone. I-Alprostadil (Caverject, Edex, MUSE) lelinye iyeza elamkelweyo yi-FDA enokusetyenziselwa ukunyanga ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile (ED). Inokulawulwa ngeendlela ezimbini: njengepenile suppository okanye njenge-self-injection kwisiseko okanye kwicala lobudoda. Inaliti yePenile lolona hlobo lusebenzayo kunyango lwe-ED kumadoda angenakuthatha unyango ngomlomo.
Ukuba amayeza ayisebenzi okanye ayifanelekanga, izixhobo zokucoca ulwelo kunye nokufakwa kwepenile njlnjl ezinye izibonelelo zinokunceda amadoda ukuba afezekise okanye agcine ulwakhiwo. Ikwavunyiwe ukuba isetyenziswe kubafazi, yibiza kakhulu. I-Dilators inokunceda abantu ababhinqileyo abanamava okuncipha kwilungu lobufazi. Izixhobo ezinjenge-vibrators zinokuba luncedo ukunceda ukuphucula ukonwaba ngokwesondo kunye novuthondaba.
Kukho amayeza athile kunye nezinye "izongezo zokutya" ezibanga ukunyanga ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile, njenge: Panax ginseng supplements, ginkgo, juice ye-pomegranate, kunye ne-yohimbe supplements njl. kuqala ngaphambi kokusebenzisa nasiphi na isongezelelo, ukuqinisekisa ukuba ikhuselekile ngokwaneleyo kunyango lwe-ED.
Ukuphathwa ngomcebisi oqeqeshwe kakuhle kunokukunceda ujongane noxinzelelo lwangaphambili lwezesondo, unxunguphalo, uxinzelelo, istree, kunye nomzimba ombi. Banokukunceda kunye neqabane lakho ukuba niphinde nidibane ngokweemvakalelo, ezinokukunceda no-ED wakho.
Kumadoda amaninzi, utyando kufuneka lubeyinto yokugqibela, ngoqhaqho lwe-vascular ukulungisa ezinye zezizathu ze-ED. Ixesha lokufumana kwakhona liyahluka, kodwa inqanaba lempumelelo liphezulu.
Iziyobisi eziphambili ze-5 ezisebenzayo zokunyanga ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile (ED) emhlabeni?
Iingxelo ezininzi ze-anecdotal zibonisa ukuba ezi ziyobisi zilandelayo ze-4 ezonyusa isondo zezona zilungileyo ukunceda amadoda ukuba anyange ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile (ED).
I-Tadalafil ikudidi lweziyobisi zomlomo ezibizwa ngokuba yi-phosphodiesterase (PDE) inhibitors, ezithengiswa phantsi kwegama lophawu I-Cialis kunye ne-Adcirca, isetyenziselwa ukunyanga ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile (ED) kunye neempawu ze-benign prostatic hypertrophy (BPH, eyandisiweyo yeprostate). I-Tadalafil isebenza ngokwandisa ukuhamba kwegazi ukuya kwilungu lobudoda ukunceda indoda ukuba ifumane kwaye igcine ulwakhiwo. Ngamanye amaxesha, isetyenziselwa ukunyanga uxinzelelo lwegazi lwe-pulmonary (PAH) (uxinzelelo lwegazi oluphezulu kwimithambo yegazi ebonelela ngemiphunga).
Iingxelo ezininzi ze-anecdotal zibonisa ukuba iTadalafil (Cialis) lelona chiza lihlala ixesha elide le-PDE5 ye-ED, inokuhlala ukuya kuthi ga kwi-36 ~ 72hours. ingathathwa njengemihla ngemihla okanye isiseko esifunekayo. Ukuba i-tadalafil ithatha njengemihla ngemihla, inokuzama isenzo sokwabelana ngesondo nangaliphi na ixesha phakathi kweedosi zakho, ungathathi i-tadalafil rhoqo rhoqo kube kanye yonke imihla, idosi yesiqhelo ye-tadalafil yi-2.5 mg ukuya kwi-5 mg ngomlomo kanye ngemini. Ukuba i-tadalafil ithathe njengoko kufuneka, ihlala ubuncinci imizuzu engama-30 ngaphambi kokuba ubenokwabelana ngesondo, idosi eqhelekileyo ye-tadalafil yi-5 mg ukuya kwi-20 mg ixhomekeke kwimpendulo yeCialis (tadalafil) kwaye hayi rhoqo ngaphezulu kweeyure ezingama-24. Iziphumo zeTadalafil kubuchule bezesondo zinokufikelela kwiiyure ezingama-36 ~ 72. Xa uthatha i-tadalafil kwishedyuli eqhelekileyo kwaye uphose idosi, yithathe ngokukhawuleza nje ukuba ukhumbule. Ukuba kufutshane nexesha ledosi elandelayo, tsiba idosi ephosiweyo, thabatha idosi elandelayo ngexesha eliqhelekileyo. Sukuyiphinda kabini idosi ukuze ubambe. I-Tadalafil ifuna ivenkile kubushushu begumbi kude nokukhanya kunye nokufuma, ayinakugcina kwigumbi lokuhlambela, kwaye igcine onke amayeza kude nabantwana kunye nezilwanyana zasekhaya, inokuthathwa kuphela ngabantu abadala abaneminyaka eyi-18 nangaphezulu.
Ukongeza, onke amayeza anokubangela umngcipheko kunye nezibonelelo. Nokuba i-tadalafil iyasebenza, unokufumana iziphumo ebezingalindelekanga ze-tadalafil, kubandakanya: intloko ebuhlungu, isisu esibuhlungu, iintlungu zomqolo, iintlungu zemisipha, impumlo egudileyo, ukugungxula, okanye isiyezi njl.njl. okanye usokhemesti ngokukhawuleza. Rhoqo, ukuba kwenzeka utshintsho lombono okanye ukulahleka kombono ngequbuliso (kubandakanya ukungaboni kakuhle, kwelinye okanye kuwo omabini amehlo)), ulwakhiwo olude oluhlala ixesha elide lune-4 okanye iiyure ezingaphezulu, ukuncipha ngesiquphe okanye ukulahleka kwendlebe, ngamanye amaxesha ukukhala ezindlebeni kunye nesiyezi, ukusabela okungathethekiyo (irhashalala, ukurhawuzelela / ukudumba, ukuba nesiyezi, ukuphefumla nzima njlnjl.) kunye nezinye iziphumo ezibi, yeka ukuthatha i-tadalafil kwaye ufumane uncedo lonyango kwangoko.
Okwangoku, i-Tadalafil (Cialis) iipilisi zomlomo / i-capsule inokusebenzisana namayeza amiselweyo nangaphezulu kwekhawuntareni, iivithamini, kunye nokutya okanye isongezo semifuno. Ukunceda ukunqanda ukuhlangana kweTadalafil, kuya kufuneka ufumanise ukuba i-tadalafil inokusebenzisana njani nenye into oyithathayo, kwaye uthethe nogqirha wakho okanye usokhemesti. Sukuqala, uyeke, okanye utshintshe idosi yawo nawaphi na amayeza ngaphandle kwemvume yogqirha. Soloko uvumela ugqirha wakho kunye nosokhemesti malunga nawo onke amayeza akho ngoku.
I-Vardenafil, ekwabizwa ngegama le-Levitra okanye iStaxyn, lunyango olusebenzayo olunyanga ukungasebenzi kakuhle kwamadoda, luza njengecwecwe kunye nokonakala ngokukhawuleza (linyibilike emlonyeni kwaye liginywe ngaphandle kwamanzi) ithebhulethi ekufuneka ithathwe ngomlomo. Njengamanye amayeza e-PDE5 e-ED, i-vardenafil isebenza ngokwandisa ukuhamba kwegazi ukuya kwilungu lobudoda. Indlela yokusebenza yeVardenafil eyi-nitric oxide eyenza i-enzyme guanylate cyclase ikhokelele ekwandeni kwe-cyclic guanosine monophosphate (cGMP) kwiiseli zemisipha egudileyo ye-corpus cavernosum. I-cGMP ibangela ukuphumla kwemisipha egudileyo, ukwandisa ukuhamba kwegazi kwilungu lobudoda, kukhokelela kulwakhiwo. Umsebenzi weVardenafil uyafana ne-sildenafil okanye iViagra, kodwa iViagra ihlala phakathi kwe-2 kunye neeyure ezingama-4, ngelixa iVardenafil (Levitra) ihlala iiyure ezi-4. Nangona kunjalo, ukusetyenziswa kwe-vardenafil akufanelekanga kwabasetyhini, kwaye iziphumo ze-vardenafil ngexesha lokukhulelwa okanye ekuncanciseni abasetyhini akaziwa.
Iingxelo ezininzi ze-anecdotal zibonisa ukuba i-vardenafil lunyango lokuqala lokunyanga ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile, isebenza ngokukhawuleza kancinci kune-Viagra (sildenafil) kunye neCialis (tadalafil), inokusebenza ngcono ukuba i-vardenafil ithathwe kwimizuzu engama-30 ukuya kwengama-60 ngaphambi komsebenzi wesondo. IVardenafil inokuthathwa kunye okanye ngaphandle kokutya. Kodwa ukusela utywala akucetyiswa, kuba kunciphisa ithuba lokufumana ulwakhiwo. Utywala bunokunyusa umngcipheko weziphumo ezibi. Nangona kunjalo, iVardenafil isebenza ngokukhawuleza xa ithathwa kwisisu esingenanto. Isisombululo esinconywayo sokuqala se-vardenafil yi-10 mg, ngokubhekisele ekusebenzeni nasekunyamezelweni idosi inokunyuswa iye kwi-20 mg okanye yehle ye-5 mg, kwaye eyona idosi iphakanyisiweyo yi-20 mg. I-Vardenafil akufuneki ithathwe ngaphezulu kwakanye ngemini kuyo nayiphi na idosi, yome izandla zakho ngaphambi kokusebenzisa i-vardenafil, susa idosi kwiphakheji ye-vardenafil ngoko nangoko, beka i-vardenafil tablet kulwimi lwakho kwaye uyivumele inyibilike ngokupheleleyo. Musa ukutyumza okanye ukwahlula ithebhulethi, i-vardenafil akufuneki ithathwe ngolwelo, kufuneka igcinwe kubushushu begumbi kude nobushushu kunye nobushushu.
Musa ukuthatha i-vardenafil kunye namayeza afanayo kunye, njenge-avanafil (Stendra), sildenafil (Viagra), okanye i-tadalafil (i-Cialis), inokuba nakho ukunxibelelana namanye amayeza okanye ukutya okuthathayo. Okwangoku, thintela ukusebenzisa iimveliso ze grapefruit, ukusela utywala kunye necuba, kuyonyusa ezinye iziphumo ebezingalindelekanga ze vardenafil. Kuya kufuneka uthethe nogqirha wakho okanye usokhemesti xa unokuthatha i-vardenafi tablet ngala mayeza, unokunceda ukunqanda ukusebenzisana kwe-vardenafi.
I-Avanafil (iStendra) lelinye ichiza le-PDE5, elisetyenziselwa ukunyanga ukungasebenzi kakuhle kwamadoda (ED). I-Avanafil isebenza njengezinye iziyobisi eklasini yayo ngokwandisa ukuhamba kwegazi ukuya kwilungu lobudoda, ngaphandle kohlobo oluqhelekileyo, lunyango olukhuselekileyo nolusebenzayo lwe-ED. Ngokungafaniyo neTadalafil (Cialis) kunye neSildenafil (Viagra), ibonisa ukhetho olukhulu lwe-PDE5 ngaphezulu kwe-PDE6 kunayo yomibini i-sildenafil kunye ne-vardenafil, kodwa ukhetho oluncinci kune-tadalafil. I-Avanafil inokusetyenziswa yodwa okanye namanye amayeza, ayisaziwa ukuba i-avanafil ikhuselekile kwaye iyasebenza ebantwaneni.
Iingxelo ezininzi ze-anecdotal zibonisa ukuba i-avanafil lelona nyango litsha livunyiweyo le-FDA kwimarike, lisebenza ngokukhawuleza ngakumbi kunamanye amayeza akwiklasi enye, sebenza nje kwimizuzu eli-15. I-Avanafil inokuthathwa kunye okanye ngaphandle kokutya, ngokunyamezelwa okukhulu, inokuhlala ukuya kwiiyure ezintandathu. Amaxabiso eziphumo ebezingalindelekanga ze-avanafil aphakathi kwezona ziphantsi kuzo zonke ii-PDE5 inhibitors. Kwaye, i-avanafil njengegama lophawu lweyeza, ixabiso le-avanafi liya kubiza kakhulu kunezinye iziyobisi ezonyusa isondo. Ivela ikakhulu kwiifom zomlomo (iipilisi) zokunyanga umba wamadoda we-ED, kukho amandla amathathu eetafile ze-avanafil: 50 mg, 100 mg kunye ne-200 mg. Kumadoda athatha i-50mg idosi ye-avanafil, kufuneka uthathe imizuzu engama-30 ngaphambi kokuba ulale; Kumadoda athabatha idosi ye-avanafil kwi-100mg kunye ne-200mg, ethatha kuphela imizuzu eyi-15 ngaphambi kokulalana, kwaye ungathathi i-avanafil rhoqo rhoqo kube kanye ngemini. I-Avanafil ifuna ivenkile kubushushu begumbi, kude nobushushu obuninzi kunye nokufuma (hayi kwigumbi lokuhlambela), kwaye kude nokufikelela kwabantwana.
Ukongeza, i-avanafil ikwanokunxibelelana kwe-pharmacodynamic, kuya kufuneka uthethe nogqirha wakho okanye usokhemesti ukuba ucwangcisa ukuthatha amanye amayeza kagqirha kunye nalawo angabhaliswanga, iivithamini, izongezo zesondlo, kunye neemveliso zamayeza, ezinokunceda ukunqanda ukuhlangana kwe-avanafi kunye neziphumo ebezingalindelekanga ze-avanafi.
I-Dapoxetine hydrochloride (hcl) yinto emfutshane ekhethiweyo yokwenza i-serotonin reuptake inhibitor (SSRI), yayivunyiwe okokuqala kunyango lwamadoda afunekayo ngaphambi kwexesha (PE). I-Dapoxetine isebenza ngokuthintela umthuthi we-serotonin kwaye emva koko inyuse isenzo se-serotonin kwii-receptors zangaphambi nangemva kwe-postynaptic, yinto emhlophe yomgubo kunye nokunganyibiliki kwamanzi, inokutsalwa ngokukhawuleza emzimbeni, inyamezeleke kakuhle, sisiyobisi somlomo sokungasebenzi kakuhle kwe-Erectile kunye nokuphazamiseka kwe-Ejaculatory . Umthamo wokuqala we-dapoxetine yithebhulethi enye ye-30mg, thatha i-dapoxetine tablet 1 ~ 3 iiyure ngaphambi kokuzibandakanya kwezesondo, inokunyuswa iye kwi-dapoxetine 60 mg emva kweeveki ezi-4 kwiiveki ze-12, eyona nto iphambili ekucetyisweni kwedosi ye-ddapoxetine kanye ngeeyure ezingama-24. Iziphumo eziqhelekileyo zecala le-dapoxetine zibandakanya ukuba nesiyezi, intloko ebuhlungu kunye nesicanucanu. Xa uthatha amanye amayeza, nceda ujonge kugqirha wakho okanye usokhemesti kwaye uqiniseke ukuba ungathatha nge-dapoxetine, unokunceda ukunqanda ukuhlangana kwe-dapoxetine namanye amayeza.
I-Sildenafil sisiyobisi sokuqala somlomo ukuba ibe yi-FDA evunyiweyo kunyango lokuqala lwe-erectile dysfunction (ED), yinto eyaziwayo ye-PDE5 inhibitor. I-Sildenafil isebenza ngokwandisa ukuhamba kwegazi ukuya kwilungu lobudoda ngokuphumla kwemithambo yegazi kunye nemisipha egudileyo ukunceda indoda ukuba ifumane kwaye igcine ulwakhiwo. Kwakhona, iSildenafil inokusetyenziswa emadodeni nakwabafazi ukunyanga uxinzelelo lwegazi kwimiphunga, iyasebenza kwi-enzyme ye-PDE5 emiphungeni ukuze ihlaziye imithambo yegazi, oku kwandisa ukubonelelwa kwegazi emiphungeni kunye nokunciphisa umthwalo wentliziyo. I-Sildenafil ithandwa kakhulu kunamachiza afanayo, kunye neenguqulelo zohlobo oluqhelekileyo kunye nebrand. I-Viagra kunye neRevatio zithengiswa kwintengiso phantsi kwegama lophawu lweSildenafil, zinokuthathwa ngomlomo okanye ngenaliti emthanjeni, iifom zedildi ye-sildenafil iza njengecwecwe kunye nomgubo wokumiswa. Ukuseta kuhlala ngaphakathi kwimizuzu engama-20 kwaye kunokuhlala malunga neeyure ezi-2.
Izigulana ezininzi zisebenzisa i-sildenafil ukunyanga ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile (i-ED), idosi ecetyiswayo yesildenafil yi-50mg, njengoko kufuneka, thatha i-sildenafil ubuncinci imizuzu engama-30 ngaphambi kokuba usebenze ngesondo, kodwa hayi ngaphezulu kweeyure ezi-4, iyure e-1 ngaphambili yeyona isebenzayo, yenza ungathathi ngaphezu kwesinye ngosuku. Ngokusekwe ekusebenzeni nasekunyamezelweni, idosi yesildenafil inokunyuswa iye kwiqondo eliphezulu le-sildenafil 100 mg okanye lehle laya kwi-sildenafil 25 mg, inokuthathwa kunye okanye ngaphandle kokutya. Kodwa, ukutya okunamafutha aphezulu kuthatha kunye ne-sildenafil kunokulibazisa ukuba ichiza liqala ukusebenza ngokukhawuleza kangakanani.
ISildenafil vs. Tadalafil VS Vardenafil VS Avanafil Yeyiphi eyona ilungileyo?
I-Sildenafil (Viagra), Tadalafil (Cialis), Vardenafil (Levitra) kunye neAvanafil (Stendra) zezona zixhaphakileyo iziyobisi ezichaziweyo ezonyusa isini ukunyanga ukungasebenzi kakuhle kwamadoda e-Erectile (ED), zisebenza ngokwandisa ukuhamba kwegazi ukuya kwilungu lobudoda, lelakhe iklasi yamachiza abizwa ngokuba yi-PDE5 inhibitors.Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil kunye neAvanafil basebenza ngeendlela ezifanayo, ichiza ngalinye linemichiza eyahlukileyo, ke umsebenzi ngamnye wechiza uya kuba nefuthe elingafaniyo, kodwa lisebenza kakuhle kwaye libangela iziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa. .
ISildenafil vs Tadalafil (Viagra vs Cialis)
I-Tadalafil kunye ne-sildenafil zezona zinto zixhaphakileyo ze-phosphodiesterase 5 inhibitors ezisetyenziselwa ukunyanga ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile (ED), yomibini isebenza kuphela xa indoda ivuswa ngokwesondo, ngokusebenza ngokukuko kunye nokhuseleko, inokuphucula kakhulu ukuzithemba kwamadoda ngokwesini. Nangona kunjalo, amadoda amaninzi akhetha iTadalafil kune-sildenafil, njengoko ihlala ixesha elide, isebenza ngokukhawuleza kwaye ineziphumo ebezingalindelekanga ezinobunzima, i-tadalafil ayinakuchaphazeleka kukutya ngokufanayo ne-sildenafil. Kwaye ngokuchaseneyo, amanye amadoda akhetha i-sildenafil emva kokuzama i-tadalafil engalinganiyo kubo.
ISildenafil vs Vardenafil (Viagra vs Levitra)
IVardenafil kunye ne-sildenafil zombini ziyi-PDE-5 inhibitors ezichaziweyo kunyango lwe-erectile dysfunction (ED). Ngolwakhiwo, i-vardenafil iyafana ne-sildenafil, inamandla ngakumbi kwaye iyakhetha ngakumbi kune-sildenafil ekuthinteleni i-phosphodiesterase-5. Unyango lwe-ED, isiphumo sevardenafil siyafana nesildenafil, zombini zinokuhlala iiyure ezine ukuya kwezintandathu. Olona thuba kuphela lwe-vardenafil kwi-sildenafil, ayithinteli i-phosphodiesterase-6 ukutshintsha imbonakalo yombala, kwaye ngamanye amaxesha i-sildenafil iba nefuthe elinqabileyo. Omabini la machiza anokuthathwa kunye nokutya, kodwa iVardenafil ithambekele ekuchaphazelweni kancinci kukutya okanye butywala. Ukongeza, ezinye zixeliwe zithintela i-vardenafil isebenza ngakumbi kwizifo zeswekile kunamanye amayeza e-erectile dysfunction.
ISildenafil vs Avanafil (Viagra vs Stendra)
I-Sildenafil kunye ne-Avanafil ziyafana ngokusebenza, zezinye iziyobisi ze-PDE5 inhibitors, zombini ziyanyamezeleka. I-Avanafil sisizukulwana sesibini se-phosphodiesterase yohlobo lwe-5 inhibitor, ethengiswa kuphela njengegama lophawu, ngaphandle kwefom yesiqhelo, sisiyobisi esitsha sokwazisa ngesondo kwintengiso yonyango lwe-erectile dysfunction (ED). I-Sildenafil kunye ne-Avanafil ngamayeza asebenza ngokufutshane e-ED, kodwa iAvanafil isebenza ngokukhawuleza okukhulu, enesiqingatha sobomi, ihlala isebenza kwisithuba semizuzu eli-15 emva kokuyisebenzisa. I-Avanafil iyeyona nyango ikhawulezayo ekusebenzeni kwe-erectile okwangoku kwintengiso. Ixabiso nje le-avanafil liphezulu kakhulu kunezinye ii-PDE5 inhibitors, kodwa i-sildenafil ibonakala ithandwa kakhulu, mhlawumbi amaxabiso esildenafil asezantsi ngakumbi kwaye avela ngaphambili kwintengiso.
Umsebenzi weTadalafil kunye ne-avanafil ngendlela efanayo, isetyenziselwa ukunyanga ukungasebenzi kakuhle kwamadoda (i-ED), ineziphumo ebezingalindelekanga ezininzi kunye nokusebenzisana. I-Avanafil yamkelwa yi-US FDA ngo-2012 kwaye yaba yi-PDE5I yesine kwimarike, inyamezeleke kakuhle, isiqingatha sobomi se-avanafil sinesinye kwisithathu se-tadalafil. Inokuqala ngokukhawuleza kunye nexesha elincinci lesenzo kune-tadalafil
I-Tadalafil (i-Cialis) kunye ne-Vardenafil (i-Levitra) zivunyelwe yi-FDA ukunyanga ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile (ED), zivela kudidi olunye lweekhemikhali, iTadalafil sisiyobisi semihla ngemihla esasisebenzisa ukunyanga iprotate eyandisiweyo, iVardenafil isetyenziswa ngokungqongqo njengeyeza yokungasebenzi kakuhle kwe-erectile (ED). Nangona kunjalo, i-tadalafil inokusebenza ngokukhawuleza kune-Vardenafil kwaye ihlala ixesha elide kunye neziphumo, i-Tadalafil kunye ne-Vardenafil ineziphumo ebezingalindelekanga ezifanayo kunye nokunxibelelana, zozibini iziyobisi zinokusetyenziswa kunye okanye ngaphandle kokutya njengoko kufuneka ngaphambi komsebenzi wesondo, kukufakwa kweVardenafil kuphela kunokuchaphazeleka kukuphakama- ukutya ukutya okunamafutha, ukufunxwa kweTadalafil akunakuchaphazeleka kukutya.
Iklasi yeziyobisi I-Phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitor I-Phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitor
isimo Igama lebrand kunye noGeneric Igama lebrand kunye noGeneric
imo Ithebhulethi yomlomo Ithebhulethi yomlomo
Umthamo osemgangathweni I-5 ukuya kwi-20 mg njengoko kufuneka ngaphambi komsebenzi wesondo ukuya kube kanye yonke imihla njengoko kuyalelwe ngugqirha I-5 ukuya kwi-20 mg njengoko kufuneka ngaphambi komsebenzi wesondo okanye i-2.5 ukuya kwi-5 mg kanye yonke imihla njengoko kuyalelwe ngugqirha
Ihlala ixesha ubuncinci imizuzu engama-60 phambi kwesandla. Imizuzu engama-30 ngaphambi kokwabelana ngesondo
Imiphumela Impumlo okanye impumlo egudileyo, intloko ebuhlungu, ukugungxula, isisu esibuhlungu, ukungaginyisi mathe, kunye nentlungu yomqolo Impumlo okanye impumlo egudileyo, intloko ebuhlungu, ukugungxula, isisu esibuhlungu, ukungaginyisi mathe, kunye nentlungu yomqolo
Unyango oluqhelekileyo kuthathwe njengoko kufuneka, ungacebisi ukusetyenziswa kwexesha elide kwexesha elide kuthathwe njengoko kufuneka, ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kunokuba kufanelekile kwabanye abantu.
Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil kunye Avanafil ayizukunyanga ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile (ED), kodwa banokubonelela ngoncedo kwiimpawu zayo. Umzimba womntu wonke uphendula umahluko kwiziyobisi ezonyusa isondo, iziphumo ebezingalindelekanga ziyahluka ukusuka komnye umntu ukuya komnye, ekuphela kwendlela yokwazi ukuba leliphi elona chiza lilungele wena mhlawumbi ngokuzama kunye nephutha. Okanye usebenza ngokuthe ngqo nogqirha okanye usokhemesti, ukulandelela iziphumo ebezingalindelekanga kwaye uthathe isigqibo sokuba leliphi ichiza elilungileyo kunyango lwakho lwe-erectile dysfunction (ED).
I-Phosphodiesterase-5 inhibitors ye-Erectile Dysfunction (ED)
imveliso Sildenafil Tadalafil Vardenafil Avanafil
uhlobo Viagra Cialis Levitra Stendra
Inguqulelo yesiqhelo Ewe Ewe Ewe Hayi
imo ithebhulethi yomlomo okanye ukumiswa kolwelo ithebhulethi yomlomo ithebhulethi yomlomo ithebhulethi yomlomo
Umyinge oqhelekileyo 25mg, 50mg, 100mg 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg 5 mg, 10 mg, 20 mg 50 mg, 100 mg, 200 mg
Ixesha: Ixesha 2 ~ 3hours ukuya kwiiyure ze-36 iiyure 4 ~ 5 iiyure 6 ~ 12
Ukusetha (imizuzu) 30 ~ 60 15 ~ 30 30 ~ 60 15-30
Ukufunxa okwenziwa kukutya Ewe (ukutya okunamafutha aphezulu) Hayi Ewe (ukutya okunamafutha aphezulu) Hayi
Imilinganiselo njengoko kufuneka mihla le okanye ngeveki njengoko kufuneka njengoko kufuneka
yoGcino Nge-25 ° C (77 ° F) Nge-25 ° C (77 ° F) Nge-25 ° C (77 ° F) Ubushushu bamagumbi, phakathi kwama-68 ° F ukuya kuma-77 ° F (20 ° C ukuya kuma-25 ° C)
Nazi ezinye iimpendulo ezivela kubaHlaziyi emva kokuzama iziyobisi ezonyusa isini ukunyanga i-ED yamadoda:
“I-PDE5 inhibitors ayenzi ukuba ube li-hornier kwaye ayinyanzelisi ukwenziwa okuzenzekelayo, bayayiphucula ukuhamba kwegazi ke xa ukhuthazwa ii-erections zikumgangatho ophezulu. Ke ukuba UFUNA iphonografi ukuze ukhuthazwe abayi kuyitshintsha loo nto. Kwimeko ye-PE ndicinga ukuba ii-PDE5 inhibitors ziya kuba sengqiqweni kuye wonke umntu ukuze kwandiswe ukuhamba kwegazi. Naluphina ukhetho olukhankanywe ngasentla luya kusebenza kuloo mxholo, nangona kwakhona ndikhetha i-tadalafil "
”Kudala ndisebenzisa i-tadalafil kangangeminyaka emi-3. kwaye ngoku ndineminyaka engama-63. Ndinqumle itabletil ye-20mg kwikota (malunga ne-5mg) kwaye ndithathe yonke imihla ye-3. Ndinezilungiso nanini na ndinqwenela kwaye ndiziva ndilungile. Ndimele nditsho ukuba ndiyakholelwa ngokunyanisekileyo ukuba olu setyenziso lundenza ukuba ndoyike ngakumbi kunangaphambili ebomini bam ”
”Ndithatha i-tadalafil engama-20 mg rhoqo kusasa ngeevithamini zam. Ihlala kwinkqubo yakho ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-36, kunye ne-1/2 yobomi yeeyure eziyi-18. Ukuthatha i-tadalafil mihla le nokuba zithini na izicwangciso zesondo ezisebenza kakuhle kum. Andinazo iziphumo ebezingalindelekanga, kwaye ndingxamele ukuhamba ngawo nawuphi na umzuzu. Oku kunceda ngamaxesha okuzenzekelayo. Nje ukuba ufumane idosi efanelekileyo ye-tadalafil, ndicebisa ukuba uyithathe rhoqo ngexesha elifanayo yonke imihla… ”
”I-Tadalafil indinceda ndibenokwakha okuqinileyo, okuthembekileyo. Ndifumanisa ukuba ukuba nzima ngakumbi kunciphisa uvakalelo kunye noxinzelelo malunga nokwakhiwa kwam, okukhokelela ekuhlaleni ixesha elide esp. kwindlela yokufundisa. ”
”Ndinazo zombini kwaye ndikhetha i-tadalafil kune-sildenafil citrate. Ngokukodwa ukuba ucwangcisa ukuphinda wenze i-MDMA, i-tadalafil iyaqhubeka nokusebenza. I-Sildenafil citrate indinika i-acid reflux nayo. I-Tadalafil ibonakala isebenza ngcono nayo. Ulungiso olungcono kunye nexesha elide ”
"I-Tadalafil ibhetele kune-vardenafil, iziphumo zayo zide ziye kuthi ga kwiiyure ezingama-36 ezaziwa njenge" pilisi yeempelaveki "kodwa i-vardenafil kunye nefuthe le-tadalafil zihlala kuphela iiyure ze-5 kwaye azisebenzi kangako ukuba utya ukutya okunamafutha aphezulu kodwa i-tadalafil isebenza ngokufanelekileyo ngaphandle komcimbi. . ”
”Ndineminyaka engama-58 kwaye bendisebenzisa i-vardenafi 20 mg iminyaka eliqela. Kusebenza kakhulu kum nomfazi kunye nemiphumo emibi. "
”Ndino IPAH. Ndithatha i-tadalafil 40mg kunye ne-Opsumit (macitentan) 10mg. Le combo isebenze kakuhle kum kule minyaka ingama-5 idlulileyo. Izibhedlele ezimbalwa apha naphaya, kodwa zizonke, zibhetele kakhulu kune-5yrs endichithe ndingafumaneki. Ingcali yam indixelele ukuba i-sildenafil yomelele njenge-tadalafil, kodwa ulwalamano olufanayo nolwabelana ngesondo. Uhlobo oluqhelekileyo lubizwa ngokuba yiAlyq. Ezinye iinshurensi zikugcina kwiSildenafil kuba zitshiphu. Mhlawumbi ukufumana igeneric kuya kunceda ukunciphisa iindleko ze-sildenafil. ”
”Ndineminyaka engama-33. Mna nomfazi sisebenza kakhulu kubomi bethu bezesondo. kodwa kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo ndinobunzima bokwenza ulwakhiwo, nangona ingqondo nomzimba wam usithi ewe, incanca yam ithi hayi. Ke ndithenga i-sildenafil kwaye ndicinga ukuba ingandinceda kwaye ndiyamangaliswa kukuba iyandisebenzela. Kwakunzima ngenene. Ndivakalelwa kukuba iza kuqhuma. ”
Amava ekwabelwana ngawo kwiQuora
Nazi ezinye iimpendulo ezivela kuQuora emva kokuzama iziyobisi ezonyusa isini ukunyanga i-ED yamadoda:
"I-Tadalafil yabelana ngokusebenza ngokukuko kunye nokukhuseleka kunye neSildenafil Citrate kwaye ngokusisiseko kuphucula ukuqiniseka kwesigulana. Ngaphaya koko, abaguli kunye nabahamba nabo bathambekele kwi-tadalafil kwi-sildenafil. Ke, i-tadalafil inokuba lukhetho oluphezulu kunyango lwe-ED ”
”Ipilisi entsha yokuphucula i-ED ifikile kwintengiso kule minyaka idlulileyo kwaye yiStendra (Avanafil). Nanku ukujongwa kuthelekiso lweAvanafil vs Sildenafil Citrate. Omabini la machiza anokunceda ekunyangeni imeko yakho ye-ED. Nangona kunjalo, iAvanafil inesandla esiphezulu, kuba inexesha elide lokusebenza kunye neziphumo ebezingalindelekanga. Ukongeza, iSildenafil Citrate ibiza kakhulu kwaye ayizukuhlala ixesha elide. Oku kunokubangela imali eninzi ekuhambeni kwexesha. Lilonke, iAvanafil yeyona ibalaseleyo kwezi zimbini ”
”I-Tadalafil (i-Cialis) yemihla ngemihla, eyaziwa ngokuba yipilisi yeempelaveki, sesinye sezona zisombululo zisemgangathweni kwizigulana ezine-erectile dysfunction. Ukusebenza ngokukuko kunye nexesha elide leziyobisi lenza ukuba kugcinwe ulungelelwaniso oluzinzileyo nolude, ukunyanga ukuphuma kwangaphambi kwexesha kunye nokunye ukungasebenzi. I-Tadalafil mihla le yenye yezona zinto zithengisa kakhulu kwezesondo kuphucula iziyobisi kwihlabathi namhlanje ”
”Ukungasebenzi kakuhle kwe-Erectile kunye ne-ejaculation ngaphambi kwexesha zizinto ezimbini zokuphazamiseka kwezesondo ezifumaneka emadodeni. I-Dapoxetine 60mg idlala indima ebalulekileyo ekugcineni i-ED kunye ne-PE ngexesha leseshoni
”Ngelixa iziyobisi ezinje ngeSildenafil (viagra), iTadalafil (Cialis) inceda imeko ye-erectile dysfunction (ED), azincedi nyani ixesha lokwabelana ngesondo. Kumatyala anje (kuthetha ukulibaziseka ukunyuka, okt ukwandisa ixesha lokwabelana ngesondo) elinye ichiza iDapoxetin liyasetyenziswa. Unokufumana iimveliso zamachiza eziqukethe i-dapoxetin yokwandisa ixesha lokwabelana ngesondo. Ezinye indibaniselwano zikwafumaneka njenge sildenafil + dapoxetin, Tadalafil + dapoxetin… ”
”Ukungasebenzi kakuhle kwe-Erectile luphawu kunokuba lube yimeko njengoko kunokuba nezizathu ezahlukeneyo. I-Psychological ED inokuthi ithathelwe ingqalelo iyanyangeka kwezinye iimeko ngelixa i-ED yomzimba, ngenxa yomonakalo wemithambo-luvo okanye iingxaki zokuhamba, iyanyangeka ukuba ayinyangeki. Nokuba yeyiphi indlela uncedo luyafumaneka olunokoyisa le meko. ”
”Xa ndithetha inyani, ayinamsebenzi nokuba uphi. Olona nyango lusebenzayo lwe-ED yi-PDE-5 inhibitor (Sildenafil Citrate, Tadalafil, Vardenafil, and generic equivalents)… ”
”ISildenafil isetyenziswa ngabo bane-Erectile Dysfunction imiba emadodeni. ISildenafil kunye neViagra. I-Sildenafil yile pilisi inamandla amancinci ikwaboniswa kunyango lwe-pulmonary arterial hypertension (PAH). I-Sildenafil isebenza ngokuphumla kwezihlunu kwi-penile kunye nokuphucula ukuhamba kwegazi kuyo. Esi senzo sisebenza ngokupheleleyo sesiyobisi sinceda amadoda ukuba afezekise kwaye agcine ulwakhiwo ixesha elide ”
”Kubonakala ngathi i-sildenafil isebenza kubakhi bomzimba, isizathu sesokuba i-molecule ye-nitric oxide yeyona nto iphambili kwi-sildenafil kwaye uninzi lwezincedisi zokwakha umzimba zakhiwe malunga nale molekyuli inye kwaye ziyathengiswa ukuze zisetyenziswe njenge-vasodilator yangaphambi kokuzilolonga. Kananjalo, uninzi lwabakhi bomzimba, luthatha iSildenafil kunye nee-anabolic steroids ngaphambi kokuba uzilolonge. ”
Kwenziwa kanjani thenga iziyobisi ezithembekileyo ezonyusa isondo kwi-intanethi?
Ukuthenga imigqaliselo kwi-Intanethi kulula kwaye kuyakhawuleza kunangaphambili. Ukuba ufuna ukuthenga iziyobisi ezonyusa isondo ukunyanga umba wamadoda kwi-ED ngeendlela ezahlukeneyo zamaqonga e-intanethi. Kungcono uyithenge kumthengisi onerekhodi yokuthengisa iziyobisi ezikhuselekileyo nezisebenzayo. Ngokusekwe kumava ethu kunye nengxelo entle evela kubathengi, cmoapi.com ngumthengisi weziyobisi ohloniphekileyo ohambisa iziyobisi ezisemgangathweni ophezulu ezonyusa isini ngamaxabiso aphantsi.